ကျနော်တို့ STUES အိမ်သာထဲမှာအရက်မူးမိန်းကလေးများနိုင်ငံရေးနှင့် ... WOW အကြောင်းကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်နက်ရှိုင်းသောမေးခွန်းများကိုမေးခဲ့တယ် - သတင်း
ကျနော်တို့ Stues အိမ်သာထဲမှာအရက်မူးမိန်းကလေးများနိုင်ငံရေးနှင့် ... wow အကြောင်းကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်နက်ရှိုင်းသောမေးခွန်းများကိုမေးခဲ့တယ်
ပါတီနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုများနှင့် Brexit သည်မသေချာမရေရာမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံရေးကို ပိုမို၍ အလားအလာရှိသောအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်သည်။
Stuesdays ရှိမိန်းကလေးအိမ်သာများထက်အဘယ်အရာပြုလုပ်ရန်ပိုကောင်းသောနေရာရှိသနည်း။ ဒါကြောင့်ငါဟာ Broad Street ရှိအရက်မူးမိန်းကလေးများကလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုအမှန်တကယ်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာသိဖို့ကစားသမားတွေနဲ့အတူစွန့်စားခဲ့ပါတယ်။
မော်ဂန်, 1st Year, ဇီဝဓါတုဗေဒ
တစ်စုံတစ်ဦးက tinder အပေါ်လျှင်ပြောပြရန်မည်သို့မည်ပုံ
ငါရိုးသားလိမ့်မယ်, ငါ့တစ်ခုလုံးကိုပြားချပ်ချပ်ငါနှင့်အတူ pissed ခံရဖို့သွားပေမယ့်အဘယ်သူမျှမသဘောတူညီချက်ရ။ ဥရောပကုမ္ပဏီတွေကငါတို့နှင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုကြတော့သည်။
ငါဆိုလို ... ငါကအကြောင်းအလုံအလောက်မသိရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်ဒေသမှာလွတ်လပ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ရှိခဲ့ရင်သူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့မူဝါဒတွေရှိတာတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကသူတို့မဲပေးမှာပဲ။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ?
အချိုးကျကိုယ်စားပြုမှုသို့မဟုတ် Post ကိုပထမ ဦး ဆုံးအတိတ်?
အဆိုပါ Kardashian ညီအစ်မတွေရဲ့ရှေးအကျဆုံးသောသူဖြစ်သနည်း
သေချာဘို့အချိုးကျကိုယ်စားပြုမှု! ၎င်းသည်အငြင်းပွားမှုများကိုများများဖြစ်စေနိုင်လျှင်လည်းအစိုးရ၏အငြင်းပွားမှုများသည်ကောင်းသည်ဟုငါထင်သည်။ Churchill ဟာသူလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်လူတွေကိုလေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောနေတာအထိအချေအတင်ငြင်းခုံနေတယ်။
Theresa May သည် VK အရသာရှိခဲ့လျှင်သူမဘာဖြစ်မည်နည်း။
လိမ္မော်နှင့် Passion အသီး! စောင့်ပါ, သူမတစ် ဦး အခြေခံခွေးင်, ဒါကြောင့်သူမသေချာဘို့ရေခဲပါပဲ။
Freya, 1st Year, ဒosophနိကဗေဒ
(ဘယ်ဘက် - Freya၊ ညာ - Zoe)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ပထမ ဦး ဆုံးအခွအေနေ၌ငါဆက်လက်မဲပေးကြလိမ့်မယ်။
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်တွင်မဲပေးနိုင်မှုရှိပါကမဲပေးခဲ့ခြင်း၏မရေရာမှုများကိုပြင်ဆင်သင့်သည်။ ပြည်သူ့မဲဆန္ဒတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကအရမ်းမိုက်မဲတယ်။
နောက်ဆုံးတော့သူတို့ထင်တာကိုသူတို့ထောက်ခံနေတာဟာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သိသာထင်ရှားတဲ့အာဏာကိုရဖို့အတွက်လက်တွေ့မကျဘူး။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပါတီကိုမဲပေးသင့်တဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းမဲပေးဖို့စုရုံးဖို့အာရုံစိုက်သင့်တယ်။ ။
ငါ A အချိုးကျကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အတူသဘောတူ, နိုင်ငံရေး A-Level လုပ်နေပြီးနောက်, လုံခြုံထိုင်ခုံ၏ကြီးမားသောပြproblemနာရှိတယ်, ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အများစုကိုယ်စားပြုကြသည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏ကြီးမားသောပြissueနာရှိပါတယ်။
သူမသည်အဆိုးဆုံးအရသာဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ငါ Lambrini ကိုချစ်တယ်ငါ Lambrini ကောင်မလေးကပို! သူမသည်ဒီတော့အရက်မပါတဲ့ prosecco ဖြစ်ချင်ပါတယ် - သူမနည်းနည်းပျင်းစရာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကနည်းနည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမပျင်းတာကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
Zoe, 1st Year, စိတ်ပညာ
Brexit သည်သဘောတူညီမှုတစ်ခုအနေနှင့်ယခုထိတိုင်အလွန်ဆိုးရွားနေသည်ဟုထင်မြင်မိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကဖြစ်ပျက်ရဲ့အဖြစ်ကျနော်တို့ကကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။
ပြည်သူ့မဲဆန္ဒပေးသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တိတိကျကျထင်မှတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မဲပေးခဲ့သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနှင့်ဆက်လက် - စိတ်မကောင်းပါ၊ ခွင့်ပြုပါ။ သို့သော်ပြည်သူတို့၏မဲကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်အပေါ်မဲပေးရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကကောင်းတစ် ဦး အကြောင်းပြချက်ဆိုလိုတာပါ, ဒါပေမယ့်ငါကပါတီတစ်ခုမှကြွလာသောအခါသင်ထောက်ခံမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ထင်နှင့်ဒီကိစ္စကိုနှင့်ပတ်သက်။ တစ် ဦး ချင်းစီအတှေးအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဗြိတိန်ရဲ့ပါလီမန်ထဲမှာသိသာထင်ရှားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာမတိုင်မီဒါဟာနောက်ကွယ်မှအများကြီးပိုပြီးထောက်ခံမှုလိုအပ်သည်။
ငါလည်း Lambrini ကိုကြိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမင်းကိုအလုံအလောက် fucked ဖြစ်ပေမယ့်ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘဲပျော်စရာကောင်းတဲ့ထဲမှာပါ။ သို့သော် Theresa May သည်စုန်းမကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးထိုခွေးကိုကျွန်ုပ်မုန်းသည်။ သူမသည်ကိုယ်ကျိုးရှာသော၊ ပါဝါဆာနေသော cunt ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ သူမသည်ပင်အရက်ယမကာဖြစ်ဖို့မထိုက်ပါဘူး။
Lola, 1st Year, လီဗာပူးလ်၏ Uni မှာပြစ်မှု
လှော်တက်နှင့်အတူဘီယာ Pong ကစားရန်မည်သို့မည်ပုံ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကျွန်တော့်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ထပ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တ ဦး တည်းအဖြစ်ပိုကောင်းနေနှင့်ငါတို့အုပ်စုတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်ထင်ပါတယ်။
ငါကဒီအဖွဲ့ကိုအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအလုပ်သမားရဲတိုက်ကိုပိုင်းခြားပြီးအုပ်စုနှစ်စုခွဲလိုက်လို့ပဲ။ နောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့မဲကဆန့်ကျင်နေတယ်။
ဒါဟာကိုယ့်တစ်ချိန်က left နှစ်ခုအုပ်စုများသို့ခွဲခဲ့ခြင်းနှင့်ငါ့အမြင်ပါပဲ။
၎င်းသည်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်အချိုးကျကိုယ်စားပြုမှုကိုသဘောတူသလောက်လက်ျာဘက်အုပ်စုများကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သဘောမတူခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဒါကကျွန်မဆုတ်ဖြဲလိုက်တာပါ၊ ငါသေတဲ့အထိငါ့ကိုဆုတ်ဖြဲပစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါကယခုအချိန်အထိအခက်ခဲဆုံးမေးခွန်းပဲ! သူမသည်သူမယူရန်လွယ်ကူသောကြောင့်, ငါ vanilla ရုံဂရုမစိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, Vanilla ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့သူမ vanilla ထက်ပိုခက်တဲ့အရာ… Strawberry ပါ။ သင်ထင်သည်မှာသူမကလွယ်ကူသည်ဟုသင်ထင်သော်လည်း၊ သူ့ကိုသင်ယူပါ၊ သူမသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်။ သူမသည် fruity အသံ, ပြီးတော့သင်သူမ၏သောက်, သင်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောကဲ့သို့!! သစ်သီးများ။ စုံလင်ခြင်း။